Hotsarain’ny tantara… | NewsMada
Samy mivoy ny hiovan’ny tantara ny mpifaninana roa andaniny sy ankilany amin’ny fampielezan-kevitra ataony. Tsy maintsy hiova tokoa ny tantara nefa miankina amin’ny tsirairay izany fiovana sy fanovana izany fa tsy ventesina am-bava sy amin’ny lahateny etsy sy eroa. Samy hotsarain’ny tantara amin’ny ataony sy ny efa nataony avy ary efa azo hitarafana koa ny mbola hataony izany. Tena hotsarain’ny karatra eo. Efa samy fantatra, hatreto, ny amin’iza sy ny nanao inona sy nankaiza ary nahoana sy maninona ? Nanao ny nataony teto avokoa ireo. Isika no mandanjalanja izany rehetra izany. Efa tonga saina ny rehetra ary tsy manaiky horebirebena amin’ny fitaka sy fampanantenana poakaty na ronono an-tavy sy fampandriana adrisa. Tsy azo fafana na takonana ny marina… tsy maintsy mbola hiseho izany na tsy ho anio aza. Mba tsy ho mpitondra sy fanjakana hiorina eo ambonin’ny tsy fahamarinana na lainga marivo torotra na fitaka ny ho avy eo.
Etsy andaniny, miandrandra fitoniana sy filaminana ny vahoaka fa efa tsy te hiherika krizy intsony. Famerimberina tato ho ato rahateo ny filazana fa tsy ho zakan’ny firenena sy ny vahoaka intsony izany. Tena marina izany, saingy tokony samy hiezaka ny tsy hahatongavana amin’izany ny rehetra. Tsy hifampihantsy sy hifandrangitra na koa hifampiandry kendry tohina fa tsy mahasoa antsika sy ny firenena izany. Reseo lahatra amin’ny vina sy fandaharanasanao ny mpifidy. Tokony ho fakan-tahaka amin’izany ireo mpifaninana roa ary hanao randran-tarihina any amin’ireo mpiandany amin’ny andaniny sy ankilany izany. Anjaran’ny vahoaka avy eo ny mandinika sy mitsakotsako izany. Alaviro ny teritery sy ny fandrahonana na koa fampitahorana. Ialao lavitra ny kolikoly mety hamadihana ny safidy na hividianana izany fa tsy mahasoa ny firenena.
Aoka koa anefa mba ho fifidianana madio sy milamina ary mangarahara ny hatao amin’ny herinandro. Efa samy naka lesona avokoa ny mpikarakara sy mpanomana mivantana sy ireo akaiky vilany feno arina. Tokony samy hanaiky ny voka-pifidianana eo ny rehetra rehefa mazava tahaka ny karatr’i Naivo fa nandeha araka ny tokony ho izy izany… Mba nihena sy kely kokoa ny lesoka na ny tsy fahatomombanana satria tsy misy ny tonga lafatra sy tanteraka izany eo amin’ny fifidianana. Araka ireo voalaza rehetra ireo, “Mbola hotsaraina”, hoy ilay mpanakanto iray izay !